Kitra – «Mada 2019»: manohy ny diany ny Ajesaia sy ny Fosa Jr | NewsMada
Kitra – «Mada 2019»: manohy ny diany ny Ajesaia sy ny Fosa Jr
Nitohy, omaly, ny andro fahefatra hiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara, taranja baolina kitra. Toy ny mahazatra, notanterahina tamin’ireo kianja efatra manerana ny Nosy, ireo dingana fifanintsanana ireo.
Tany Mahajanga, manohy ny diany ny Ajesaia sy ny Fosa Jr, izay samy nivoaka ho mpandresy avokoa. Nomontsanin’ny Fosa, tamin’ny isa mavesatra 6 no ho 0, ny JSMS, ka namono ny baolina dimy tamin’izany, i Jean-Yves. Tetsy ankilany, lavon’ny Ajesaia, tamin’ny isa, 2 no ho 0 ny Tam Port-Bergé. Baolina nampidirin’i Rojo, teo amin’ny minitra faha-15 sy faha-80.
Ho an’i Toamasina, nisaraka ady sahala, samy tsy nisy nitoko ny Jet Mada Itasy sy ny AS Adema. Famaranana kely izany ny an’ny Tia Kitra sy ny Jet Mada eo amin’ny andro farany, satria tafita izay mandresy amin’ny roa tonta. Samy nandresy tamin’ny isa, 3 no ho 0 ny mpifanandrina taminy kosa ny Zanakala sy ny Cnaps, raha nifandona tamin’ny FC Vakinankaratra sy ny Jofama, tany Fianarantsoa. Ny FC Grand Sud Est, nampiondrika ny AS Fitafa, tamin’ny isa tery, 2 no ho 1.
Efa samy tafakatra ny Cnaps sy ny Zanakala, izay hiaona eo amin’ny andro farany. Tsy ampiova inoninona intsony anefa ny vokatra eo amin’izany.
Resin’ny FC Ilakaka, tamin’ny isa tokana 1 no ho 0 ny 3FB Atsimo Andrefana, tany Toliara ary 7 no ho 1 no nanilihan’ny Cosfa, ny AS Rondrohoro. Hitohy rahampitso alahady, ny andro farany, amin’ny fifanintsanana, hahalalana ireo ekipa valo hiatrika ny dingana manaraka.